Macallin Jaamacaddii Waan Dhammeeyey: Gabadhii Shaxda Yaabka Leh U Degtay Macallinkeedii. Bal Sheekadan Ila Arag! | Caroog News
Macallin Jaamacaddii Waan Dhammeeyey: Gabadhii Shaxda Yaabka Leh U Degtay Macallinkeedii. Bal Sheekadan Ila Arag!
April 26, 2019 - Written by admin
Markii ay dugsiga sare dhammaysay ayey gashay jaamacad. Waxa ay ku biirtay kulliyadda dhaqaalaha. Bilihii hore ba, waa ku adkaatay jaamacaddii. Waxa ay ku wareertay afka Ingiriiska iyo xisaabaadka dhaqaalaha. Waxaa kale oo niyadjab weyn ku riday buugta waaweyn ee jaamacadda, oo marka ay soo kala rogto ay waxba ka fahmi weydo. Dhawr jeer bay ku fekertay in ay jaamacadda isaga baxdo, laakiin misena waxa ay aragtaa qeyrkeed oo ay dugsi sare isla soo dhigteen oo waxbaranaya. Muddo ay fekeraysay, ayaa waxaa u soo baxday in ay samayso tab kale oo ay waxbarashadan ku sii wadi karto. Waxa ay ahayd gabar is hubta oo aad u qurux badan e, waxa ay is tustay in wejigeeda jaamacadda ay uga baxdo. Inta arrintaas go’aan ku qaadatay ayey muddo bil ah, waxa ay baaritaan ku samaynaysay hormuudka iyo macallimiinta kulliyadda. Waxa ay soo ogaatay in macallinka ugu xiisadaha adag uu yahay hormuudka kulliyadda. Waxaa kale oo ay soo heshay in hormuudka kulliyadda uu xukumo macallimiinta kulliyaddaas. Kolkaas bay waxa ay go’aan ku gaartay in ay shax u daadiso hormuudka kulliyadda.
Maalmahaas ay talo rogrogaysay waxa ay ahayd bisha 11aad ee sannadka 2013-kii. Waxa ay shaqadeedii koowaad ka bilawday in ay hadiyad qaali ah oo soo jiidasho leh u geyso maamulaha kulliyadda. Waxa ay ku beegtay munaasibadda maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku aaddan 21ka bisha 11-aad. Awal bay qurux u dhalataye, inta aad isku sii bishay, ayey maalintaas inta hormuudka xafiiskiisii ugu tagtay, ayey si xushmad ku dheehan tahay u guddoonsiiyey hadiyado yaab lahaa. Markaas ay guddoonsiinaysay, iyada oo dhoollacaddaynaysay ayey ku lahayd, “Macallin iga guddoon hadiyaddan, waxa aan aad ugu faraxsanahay macallinimadaada, waxa aana jeclahay in aan kuugu hambalyeeyo maalinta macallinka Soomaaliyeed”. Hormuudkii, markii ay gabadhu u soo galaysay ba, quruxdeeda ayuu indhaha siin waayey. Markii ay inta soo istaagtay hadiyadda u dhiibaysay na, waxa uu la ashqaaraaray udgoonka gabadhaas ka soo baxayey iyo muuqaalka xubneheeda qaar, maadaama ay dhar ku dheggan qabtay. Weligi ma arag arday hadiyaddan oo kale u keena, oo weliba ku soo addiyey munaasabaddan muhiimka ah! Hormuudkii, si kale ayuu noqday, gabadhiina maankiisa ayey degtay.
Wixii maantaas ka dambeeyey, hormuudkii iyo gabadhii sheeko jacayl ku biyoshubatay ayaa u bilaabatay. Gabadhii, markii uu ugu soo dhacay dabinkii ay dhigtay isla jeerkaasina aragtay sida uu jecel yahay hormuudku, waxa gashay kalsooni. Iska daa wax akhris e, xitaa mar mar waa u goysaa jaamacadda, wax kastana waxaa xalliyada hormuudka. Taas iska ba daaye, dhaqaalaynteedii waxa uu ugu daray, in uu waayadii dambe, isaga uu ka bixiyo lacagta jaamacadda. Imtixaanka iyada ayaa ugu sara marta fasalka, sababta oo ah, hormuudki waxa uu bilaabay in uu gabadha imtixaanka ka saacido, oo inta imtixaanka sii siiyo ayuuna misena kala sii shaqeeyaa, kolkaas baa iyada oo xafidsan horey ka qortaa imtixaanka, dhibco sarena ku baastaa.
Gabdhii, markii ay dhammaysay jaamacaddii oo weliba dhibco sare oo yaab leh jaamacaddii uga baxday, ayaa markii ay qaadatay shahaadadii – baa awalba dan bay ku wadatay e – hormuudkii taleefoonka ka qaban weydey. Gurigeedii ayuu tagaa, kolkaas baa albaabka laga furi waayey. Macallin har iyo habeen waa jiifan waayey, waana garan waayey waxa gabadhii ku dhacay. Maalin dambe, ayey si kadis ah shirkadda Dahadshil isugu soo galeen. Markaas buu inta ku soo booday ku cataabay. Inta si yaab leh u eegtay ayey ku tiri, “Macallin jaamacaddii waan dhammeeyey!”.